Maalinta: Diseembar 9, 2019
Taageerada Turkiga ee Horumarinta ee Malaysia Airlines, Wasiirka Turhan, Wasiirka Gaadiidka ee Malaysia Anthony Loke Siew Fook iyo wafdiga ka hor kulanka ay la yeesheen Malaysia, bilyanka 2,5 bilyan dollar ee ganacsiga shisheeyaha ay la leeyihiin Malaysia [More ...]
Suuq furan oo furan ayaa laga samayn doonaa Manisa Old Garage; Qoraalka kabista ee Dawladda Hoose ee Manisa ee 'MANULAŞ'dan bayaanka', Old Garage ee Axadaha u dhexeeya saacadaha 08.00-17.00 ayaa la dhisi doonaa suuq otomaatig ah. U furan in lagu rakibo Old Garage [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya inay u adeegto gudaha Konya Konya Hizmetleri A.Ş. Codsadayaasha raba inay dalbadaan waa inay shakhsi ahaan ku dalbadaan 13 Diseembar 2019. Codso darawalka baska [More ...]
Wadarta gawaarida 6 kun ee 154 ee ku xiran IETT ayaa lagu rakibay taayirrada jiilaalka ee u hoggaansan xeerarka. Rusheeyaha ayaa la hubiyey oo ku keydinta aaladda wax lagu keydiyo lagu tirtiro biyaha masaxaadda. Nidaamyada kuleylka ee gawaarida ayaa la badelay. Ku duubista nidaamyada isku laabma iyo [More ...]
Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu oo u socota Wasiirka Turhan: Dadku waxay hakiyeen Mashruuca 23 bishii Juun; Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Ekrem Imamoglu, ayaa si toos ah loogu baahin doonaa ka hor kulanka Golaha MHP, GOOD Party iyo kooxaha CHP. [More ...]
Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Kanal Istanbul ayaa Lagu dhawaaqay; Wasaaradda Gaadiidka ayaa ku dhawaaqday inay qorshaynayso inay dhameystirto boqolkiiba 2023 mashruuca Kanal Istanbul ee loo yaqaan '60'. Qiimaha mashruucu wuxuu noqon doonaa bilyan TL 75 bilyan. Burburinta saynisyahano ka tirsan Wasaaradda Gaadiidka [More ...]
In kasta oo noocyo badan oo gaadiid ahi maskaxda ku hayaan markay tahay gaadiidku, haddana habka ugu muhiimsan ee gaadiidku waa gaadiid raaca. Magaalooyin badan oo dalkeenna ah sanado badan labadaba gaadiid gudaha iyo kuwa caalamiga ahba [More ...]
Jadwalka tareenka Adapazarı Pendik wuxuu kordhay; Tirada duulimaadyada khadka Adapazarı-İzmit-Pendik, oo ah halka duulimaadyada isku midka ah loo sameeyo 8 maalin walba, ayaa la kordhiyey ilaa maanta. Tareenka ugu horreeya ee ka yimaada Adapazarı waxaa lagu qaban doonaa inta u dhaxeysa Adapazarı iyo Pendik. [More ...]
Baadhitaanka Sınav Central ee loogu talagalay Ballamada loo Sameeyo Shaqaalaha tacliinta ee aan ka ahayn Xubnaha Kuliyada [More ...]
Ardayda ka qalin jabisay dugsiga hoose dhexe ee Pamukkale 45 ayaa soo saaray bayaan rasmi ah oo ku taariikhaysan bisha Diseembar 9 ee ka soo baxa bogga shaqada ISKUR ee shaqaalaysiinta joogtada ah. Lambarrada ogeysiinta si toos ah loogu dabaqi karo xayeysiiska ay daabacday Jaamacadda [More ...]
Hordhac cutubyada soosocda ee Rectorate of Burdur Mehmet Akif Ersoy University oo leh Imtixaanaadka Bartamaha ee Balamaha loogu talagalay Shaqaalaha Tacliinta ee aan ahayn Shaqaalaha Tacliinta iyo 2547 [More ...]